पुनर्जन्म को बिशयमा बिज्ञानले यसो भन्छ ! | Everest Online News
शनिवार, फ्रेवुअरी 17, 2018
प्रदेस ७ मा सरकार गठन : को-को परे सुचिमा ?
एक गिलास पानीको महत्व
विज्ञान विज्ञान /प्रविधि विविध
नोभेम्बर 4, 2017 डिसेम्बर 4, 2017
पुनर्जन्म को बिशयमा बिज्ञानले यसो भन्छ !
मृत्युपछि के हुन्छ ? यो अन्त्यहिन प्रश्नको हो । अहिले सम्म यसको निचोड फेला पर्न सकेको छैन । यद्यपी के मानिन्छ भने, मृत्युपछि हामीले पुन जन्म लिन्छौ । धार्मिक शिद्धान्तले यसै भन्छ । तर, अब विज्ञान पनि यसमा सहमत देखिएको छ ।
यसमाथि विश्वका अनेकन विश्वविद्यालयहरु तथा परामनोवैज्ञानिक अनुसन्धानक केन्द्रहरुले अनुसन्धान गरेका छन् । वर्तमानमा यसलाई फगत एउटा अन्धविश्वास होइन कि वैज्ञानिक तथ्यका रुपमा नै स्वीकारिएको छ ।
पुनर्जन्मलाई प्रमाणित गर्ने अनेक प्रमाण आज उपलब्ध छन् । यसमा सबैभन्दा ठूलो प्रमाण उर्जा संरक्षणको सिद्दान्त हो । विज्ञानको सर्वमान्य संरक्षण सिद्दान्तका अनुसार उर्जाको कुनै पनि अवस्थामा विनाश हुँदैन, मात्र यसको स्वरुप परिवर्तन हुन सक्छ ।
एउटा शरीरबाट अर्कोमा स्थान्तरण
जुन प्रकारले उर्जा नष्ट हुँदैन, त्यसैगरी चेतनाको पनि नाश हुँदैन । चेतनालाई वैज्ञानिक शब्दावलीमा उर्जाको शुद्धतम अवस्था भन्न सकिन्छ । चेतना एउटा शरीरबाट निस्केर अर्को शरीरमा प्रवेश गर्न सम्भव छ । र, पुनर्जन्मको सिद्धान्त पनि यही नै हो ।
पुनर्जन्मको दोस्रो प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्वजन्मको स्मृतियुक्त बालबालिकाहरु हुन् । बालबालिकाहरुको पूर्वजन्मको स्मृतिको परीक्षा आजकाल दार्शनिक र परामनोवैज्ञानिकले गर्छन् । पूर्वजन्मको अनुभवबिना मोजार्ट चार वर्षको उमेरमा संगीत कम्पोज गर्न सक्ने थिएनन् ।
लर्ड मेकाले र विचारक मील हिँड्न जान्नुभन्दा अगाडि लेख्न जान्थे । वैज्ञानिक गब्स ३ वर्षका मात्रै थिए, जब नी पिताजीका गणितीय त्रुटीहरुलाई सच्याउँथे । यसबाट प्रमाणित हुन्छ कि पूर्वजन्ममा यी बालकले आफ्नो क्षेत्रमा महारत हासिल गरेका थिए ।
सर्बप्रथम शिशु जन्म लिनासाथ रुन्छ । स्तनपान गराउनासाथ चुप लाग्छ । कष्टमा रुन्छ र अनुकुल अवस्थामा खुशी हुन्छ । शिशु हाँस स्वत तैरिन सिक्छ । यसप्रकारका घटनाहरुले हामीलाई यो सोच्नका निम्ति बाध्य गर्छ कि हरेक जीवनले पूर्वजन्मको संस्कार लिएर आएको हुन्छ । अन्यथा भर्खर जन्मेको शिशुलाई रुन कसले सिकाएको थियो ?
डा. स्टिभेन्सनलले आफ्नो अनुसन्धानका दौरान केही यस्ता मामला पनि देखे, जसमा व्यक्तिको शरीरमा उसका पूर्वजन्मका चिन्ह मौजुद थिए । आत्माको रुपान्तरण त बुझ्न सकिन्छ, तर, शारीरिक चिन्हको पुनः प्रकट एउटा रहस्यकै कुरा हो ।
डा. हेमेन्द्र नाथ बेनर्जीको भनाईमा कहिलेकाहीँ वर्तमान बिमारीको कारण अघिल्लो जन्ममा पनि हुन सक्छ । श्रीमती रोजन बर्गको उपचार यसै प्रकारले भएको थियो । आगो देख्नासाथ थर्थरी काँप्ने ती महिलाको कुनै डाक्टरले उपचार गर्न सकेनन् । थाकेर उनी मनोचिकित्सककहाँ पुगिन् । मनोचिकित्सकले उनलाई सम्मोहित गरेर पूर्वजन्मको याद दिलाए । त्यतिबेला रोजन वर्गले भनिन् कि अघिल्लो जन्ममा उनी जलेर मरेकी थिइन् । त्यसपछि मनोपरामर्शद्वारा उनी विसेक भइन् ।
सम्पूर्ण विश्वका धर्म, बर्ग, जाति तथा समाजमा पुनर्जन्मको सिद्दान्तलाई कुनै न कुनै रुपमा स्वीकारिएको छ । अन्ततः यस कम्प्यूटर युगमा पनि यो स्पष्ट छ कि पुनर्जन्मको सिद्दान्त विज्ञानसम्मत हो । आत्मा एक अदृष्य कम्प्यूटर हो भने शरीर एक रोबोट हो । हामी कर्मको माध्यमले कम्प्यूटरमा जस्तो प्रोग्राम फिट गर्छौं, त्यस्तै फल प्राप्त गछौंर्ं । कम्प्युटरले पुरानो रोबोट बिगि्रएपछि आफ्नो कर्मको हिसाबले नयाँ रोबोट बनाउँछ ।
पुनर्जन्मको विपक्षमा पनि अनेक तर्कहरु छन् । यो रहस्य शब्दद्वारा सुल्झाउन सकिंदैन ।
२०७४ कार्तिक १७ गते १३:२३ मा प्रकाशित
एमालेको समानुपातिकमा पर्ने उम्मेदवारहरू
ट्याक्सीभित्रै मृत फेला परेका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो
फ्रेवुअरी 2018 (95)
Aaha-Rara Gold Cup (6) Arsenal (6) Barcelona (7) Chelsea (9) Cricket (12) Cricket Association of Nepal(Can) (5) Everest Premier League (6) Football (9) India (10) Kathmandu (6) KP Oli (16) Liverpool (5) Manchester City (5) Manchester United (10) Nepal Cricket (17) Nepal News (7) Nepal Police Club (7) Nepal Tourism (5) Political News (13) Real Madrid (9) Ronaldo (6) Sher Bahadur Deuba (10) Sports News (6) T20 Cricket (6) Test cricket (7) अर्थ/ बाणिज्य (12) चुनाव (48) निर्वाचन (15) नेकपा एमाले (34) नेपाल (19) नेपाल प्रहरी (9) नेपाली कांग्रेस (18) प्रचण्ड (10) प्रतिनिधिसभा (11) प्रदेशसभा (7) बाम गठबन्धन (34) भक्तपुर (6) मतगणना (41) मतदान (8) माओवादी (21) माओवादी केन्द्र (9) मुख्य खबर (8) मुख्यमन्त्री (7) राजनीति (25) राष्ट्रियसभा (5)